Downhole Motor, Drill Bits, Tool Drilling - DeepFast
Uru Nka na ụzụ nke PDC
Anyị nwere ụdị ngwa ọrụ igwu mmiri ọkachamara dị elu nke ụwa na ngwanrọ nnwale, na -akpụpụta usoro nke ya na nyocha ya yana njiri mara mma na ike njikarịcha.
Dill Bit Design
A kwadebere DeepFast na sistemụ CAD/CAM zuru oke nke nwere ike iji aka ya mechaa usoro ịme ihe. A na -eji teknụzụ dị elu eme ihe n'ụdị mkpọtụ.
Nyocha ike agụba
A raara sọftụwia kọmpụta anyị na -akụ simulation bit n'okpuru ọnọdụ mgbawa dị mgbagwoju anya. Ọ na -enye ndị injinia ngwa aka ịhazi ihe atụ 3D nke bit drill.
Akụrụngwa kọmputa anyị dabara maka mpaghara mmanụ na gas ọ bụla n'ụwa, site na iji ndebiri arụnyere iji mepụta eserese na ọrụ mkpesa data dị iche iche.
Nyocha Hydraulic Bit
DeepFast na-etinye ngwanrọ CFD dị elu iji mee ka ọnụọgụ ọnụọgụ atọ nke PDC bit. Site na ịme anwansị dijitalụ, a na -edozi usoro hydraulic nke bit drill.
DeepFast bụ ụlọ ọrụ ọha na-akwado API nke na-emepe emepe na-enwe ọtụtụ ikike imepụta. Ugbu a, anyị nwere ngwaahịa ọhụrụ dị ka Dual Drill Accelerator, Micro Core bit, Modular bit wdg.
Ka ọ dị ugbu a, anyị enyela ihe karịrị 10000 Wells ọrụ, anyị na -agbakwa mbọ maka mmụba nke ọnụego nnabata, ịchekwa ọnụ ahịa maka ndị na -arụ ọrụ na mpaghara mmanụ na gas niile na ịrụ ọrụ ka mma n'ụwa niile.
Teknụzụ ụgbọ ala German Downhole
Ngwakọta rọba nwere akụrụngwa mbụ.
Emepụtara ya na igwe ọgbara ọhụrụ nwere mmesi obi ike na-aga n'ihu.
Ọdịdị dị elu maka ọrụ ịma aka.
Ọgwụ rọba ọgbara ọhụrụ.
Roba Stators na rotors mere dabere na ụkpụrụ mgbakọ na mwepụ.
Mmelite nke omume na -agbanwe agbanwe nke ngalaba ike.
Nkọwapụta ihe dị elu karịa ọkọlọtọ.
Ojiji nke ihe ruru awa 1000.
Mgbanwe dị elu
Ezigbo njikwa njikwa ọkọnọ.
Ngalaba imewe nke ọma, nwere mkpali.
Echiche nke ndị ahịa na ahụmịhe sara mbara maka akụkụ ụwa niile dịka rotors na stators.
anyị amalitela nyocha, mmepe, imepụta na ntinye nke moto downhole dị elu.
Anyị nwere ngwaahịa ọhụrụ dị ka Dual Drill Accelerator, Micro Core bit, Modular bit wdg.
Core Bit dị ime
Chinese Professional Drilling Bit nha Oil Wel ...
Na nlọghachi ya site na ndakpọ nke afọ 2020, ọnụ ahịa Brent jiri $ 70/bbl gbagoro. Ọnụ ahịa dị elu na 2021 pụtara ị nweta ego dị elu maka ndị na-emepụta ya, ikekwe ọbụlagodi ebe dị elu. Na gburugburu ebe a, onye na -ahụ maka akụ na ụba ụwa Wood Mackenzie kwuru na ndị ọrụ kwesịrị ịkpachara anya. "Mgbe ọnụahịa ...
HOUSTON- Companylọ ọrụ Halliburton webatara Crush & Shear Hybrid Drill Bit, teknụzụ ọhụụ na-ejikọ arụmọrụ nke ndị na-egbutu PDC ọdịnala yana ike na-ebelata ike nke ihe ndị na-agagharị iji bulie arụmọrụ mkpọtụ ma bulie nkwụsi ike site na nhazi mgbanwe. Ku ...